नायिका पूजाका प्रेमी को हुन् ? भन्छिन आकाश हैनन – Sandesh Press
July 21, 2021 214
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी अहिलेकी चर्चित अनि लोकप्रिय नायिका पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठको चर्चाले माहोल निकै तातिरहेको छ। धेरै दर्शकहरुले यी दुई जोडीलाई रीलमा मात्र नभएर रियलमा नै देख्न रुचाएको बताएका छन्।
पूजा आकाश फ्यान क्लबले त यी दुईको जन्मदिन भव्य तरिकाले मनाइदिने गर्छन। तर केहि हप्ता अगाडी मात्र आकाश र पुजा छुटिएको चर्चा जताततै भाइरल थियो भने पूजा शर्माले एक अन्तरवार्तामा आकाशले आफुलाई प्रेममा नभई काममा धोका दिएको तर आफुहरुको सम्बन्ध सधै एउटा मिल्ने साथीको थियो र रहिरहन्छ बताएकी थिइन्। फिल्म क्षेत्रमा उनको नाम धेरै अन्य नायकसंग पनि नजोडीएको भने पक्कै हैन। तर आकाश त पुजाको जोडीलाई धेरै दर्शकहरुले मन पराएको जोडी हो।
यस्तै नायिका पूजा शर्माले आफ्नो जीवनमा कोही विशेष व्यक्ति आएको खुलासा गरेकी छन् । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीसँगको चिट च्याट गफमा उनले आफू मिंगल हुने तयारीमा रहेको खुलाएकी हुन् । एक फ्यानले ‘कसम सिंगल हो ?’ भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भनेकी छन्, ‘सिंगल नभनिहालुम् । मेरो जीवनमा कोही आएको छ र उसलाई बुझ्दै छु । तर, त्यो व्यक्ति आकाश होइन ।’ सही समय आएपछि आफ्नो जीवनमा आएको व्यक्तिको बारेमा खुलासा गर्ने उनले बताएकी छन् । अर्को वर्षभित्र आफू विवाह बन्धनमा बाँधिने तयारीमा रहेको समेत उनले बताइन् ।
आकाश र पुजाको प्रेम चर्चा चलेपनि यी दुईले कहिले पनि आफुहरु प्रेममा नरहेको बताउदै आएका छन्। आकाशले एउटा मिल्ने साथि मात्र रहेको बताएका छन् भने पूजाले ‘हामी दुई मिल्ने साथी भएको कारणले दर्शकहरुले प्रेममा छन् कि भनेर सोच्नु भएको होला तर त्यस्तो केहि पनि छैन। पूजाका अनुसार अहिले उनलाई दर्शकहरु बाट आकाशसंग नै विवाह गर्नुपर्छ भन्ने दवाब आएका कारण आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा असर परेको बताएकी छिन। पुजाले घुमाउरो पारामा आफ्नो जीवनमा कोहि आहिसकेको बताएपनि को हुन् भनेर समय आएपछि मात्र बातौने भनेकी छिन। आफ्ना प्रेमी बारे भने उनले केहि खुलाउन चाहिनन।
Prevअबदेखि लाइसेन्स निकाल्न नयाँ व्यवस्था : ट्रायलमा आफ्नै सवारी, कुन चरणको अंकभार कति ?
Nextआज यी तीन प्रदेशमा भीषण वर्षाको सम्भावना‚ सतर्कता अपनाउन आग्रह
हाडजोर्नी दुखाइको अचुक औषधि जाइफल, यसरी गर्नुस् प्रयोग बिधिसहित हेर्नू होस